Ziso: Kupisa kupisa paFly | Martech Zone
Chipiri, May 15, 2012 Mugovera, July 8, 2017 Douglas Karr
EyeQuant muenzaniso wekutevera weziso unonyatso tarisa zvinotariswa nevashandisi pane peji mukati memasekonzi 3-5 ekutanga. Pfungwa yacho iri nyore: mukati memasekonzi mashanu mushandisi anokwanisa kukwanisa kuona zvauri, kukosha kwako chirevo, uye zvekuita zvinotevera. EyeQuant inobvumidza kugadzirisa dhizaini peji kuona kuti ndizvo zvazviri.
Heino mhedzisiro yemahara yeedu EyeQuant demo… Ndiri kufara chaizvo nekwakatariswa kuri kuiswa papeji redu rekumba!
Izvo zvinoparadzanisa EyeQuant kubva kune mamwe masevhisi inyaya yekuti zvinongotora maminetsi mashoma kuti uwane mhedzisiro. Mhedzisiro yacho inouya zvakare mumamepu matatu akasiyana:
The mepu yekutarisisa inoratidza inzvimbo dzipi dzeyako skrini yekuchengetera yakanyanya, yepakati kana kushoma kutarisisa, zvichiteerana. Kunyanya nzvimbo dzinobata maziso dzakapetwa mune rakapfuma tsvuku, avhareji nzvimbo dzinoiswa yero, nzvimbo dzisina kusimba dzewako skrini dzinozviratidza mune girini kune bhuruu. Nzvimbo dzakajeka dzinogadzira kusaona zvachose.
The mepu yekuona inopa pfupiso yekukurumidza pane yako peji rewebhu kutarisisa kwekutarisa: inoratidza nekuona izvo vashandisi vanozoona mumasekonzi matatu ekutanga ekushanya kwavo. Kubva pane kuverenga kweakanyanya kuona acuity uye avhareji daro kubva pachiratidziri, nzvimbo dzakajeka dzemepu yekuona ndidzo dzinozoonekwa nevashandisi vako mukati meichi chikamu chakakosha chekwiriro.
The Dunhu reKufarira chimiro chinopa zvakabuda muEquQuant zvakanyanya. Inoita kuti iwe ugone kutsanangura matunhu gumi pane yako skrini, iyo iyo eyeQuant ichaverenga muzana kukosha, semuenzaniso + 10% kana -45%. Iko kukosha kunoratidza kuti yakawanda sei (kana zvishoma) inokosha nzvimbo inofananidzwa neavhareji yeiyo skrini.
Mutengo webasa wakanaka, ne5 Ongororo ye $ 199 / mo US kana 50 ye $ 449. Kune zvakare mitengo yebhizinesi inowanikwa uye iyo interface inowanikwa mune zvese chiGerman neChirungu. EyeQuant zvakare ine API uye reseller package iripo!
Tags: kutarisa mepuheatmapkupisa mepumaonero mepu
May 15, 2012 pa 6: 30 PM
EyeQuant co-muvambi pano. Ndatenda nekusheedzera Douglas! Aya achangotanga uye EyeQuant ine *zvakawanda* zvinotonhorera chaizvo mupombi yegore ra2012. Kana iwe kana mumwe wevaverengi vako mune chero mibvunzo kana mhinduro, ndinoda kunzwa kubva kwamuri kuburikidza nefabian pa eyequant dot com.